Fehiloha tsy misy firavaka
Amin'ity vanim-potoana ity, ny lamaody amin'ny lamaody amin'ny akanjo ho an'ny bevohoka amin'ny fararano dia karazana varotra maro, izay ahafahanao mahita marina izay tianao ary ho tanteraka ny safidinao rehetra. Saingy misy hatrany ireo fironana ireo izay mendrika ny manamarika manokana. Ity vanim-potoana ity - akanjo tsy misy firavaka. Amin'ny ankapobeny, ny modelin'akanjo toy izany dia tsara indrindra ho an'ny lohataona, ary koa mandritra ny fahavaratra, fa koa amin'ny fararano am-piandohana, indrindra raha mipetraka any amin'ny faritra mafana ianao, dia mety ihany koa. Andeha hojerentsika ny tsipiriany momba ny lamaody amin'ny akanjo lamaody tsy misy firavaka, ny fomba hisafidianana azy ireo tsara amin'ity vanim-potoana ity sy ny hoe, araka ny tokony ho izy, mba hitafy.
Ny palitao tsy misy firavaka
Noho izany, raha ny marina, ny palitao tsy misy firavaka dia manavaka ny valanorano boribory tsy misy "lamba" izay mandrakotra ny tendany avy amin'ny rivotra mangatsiaka na orana. Izany no mahatonga ny outerwear toy ny mahazatra, fa tsy andro mangatsiaka. Matetika amin'ny famoriam-be amin'ny trano lamaody isan-karazany dia afaka mahita akanjo mafana tsy misy firavaka, izay azo atao na dia ao anatin'ny vanim-potoana tsara indrindra aza. Tena mendri-piderana tokoa izany ary amin'ny akanjo toy ny fahavaratra dia tsy azo atao mihitsy ny tsy mihaino. Saingy misy ihany ny lohataona maoderina-lohataona. Izy ireo dia tanterahana matetika avy amin'ny tweed na cashmere, ary koa ny karazana lamba kofehy marobe, satria ireo akanjo ireo amin'ny lafiny sasany dia manome voninahitra ny fomba retro . Noho izany, izany no mahatonga ny akanjo tsy misy firavaka matetika amin'ny endri-tsoratra. Indraindray ianao dia mahita modely izay manjary kely kokoa.
Ny fahamendrehana amin'ny akanjo mivantana tsy misy firaiketana dia azo lazaina fa ny fahitana azy no mahatonga ilay vehivavy silhouette efa misy, ary manantitrantitra ny hatsarana sy ny fahasoavan'ny tongotra (fotsiny noho ny fohy). Ankoatra izany, ny valan-drivotra manodidina dia manantitrantitra tsara koa ny tendany. Noho izany raha tompon-tsambatra amin'ny tendanao lava lava ianao dia ho safidy tsara ho anao ihany koa ny akanjo toy izany.
Ahoana no hitafy akanjo tsy misy firavaka?
Ny zavatra manan-danja indrindra dia ny hahafahanao mampifanaraka ny zava-drehetra, ka ny tsirairay dia ampahany amin'ny antokon'olona iray, ary miaraka amin'ny tenany ihany koa. Amin'ny ankapobeny, fahaiza-manao io fahaiza-manao io.
Ny palitao mahitsy tsy misy firavaka amin'ny fotoana mahafinaritra dia mety ho tafita miaraka amin'ny karavasy izay hihazona ny tendanao mafana ary hanamafy ny fahasoavany. Ny safidy tsara ihany koa dia lobaka, fa tsy dia mahaliana loatra ny akanjo iray izay hijery jumper na T-shirt maotina. Raha miresaka momba ny pataloha isika, dia ny fomba tsara indrindra amin'ny akanjo tsy misy kavina dia ny pataloha mivantana sy ny jirom-jirika henjana na mitatra - dia hanantitrantitra ny tongony matevina. Fa ny akora pensily dia ho safidy tsara. Ary raha ny rivotra dia rivotra mafana, dia aza adino ny mivalona ny fehiloha eo amin'ny tendanao - hanampy ny sarinao ny toetra mampiavaka azy.
Akanjo fotsy mani-pofona eo ambanin'ny mink
Grey sweetshot - fototra tena tsara ho an'ny lamaody
Vehivavy jaketa - sary samihafa sary nalaina nandritra ny fotoana rehetra
Akanjo ririnina hoditra
Ahoana no fomba fitsaboana vitiligo?
Ny fahantrana mandritra ny fihomehezana
Aretina ampahatelon'ny zaza vao teraka
Ahoana ny fomba hanesorana ny volony?
Tommy Hilfiger dia manitatra ny faritry ny lamaody
Karapanona 3d - toerana fisakafoana
Sophie Turner ao anaty kiraro
Ahoana no hanakanana ny varavarana fidirana amin'ny varavarana fidirana?
Ny krizy amin'ny 30 taona ho an'ny vehivavy
Fambolena fiterahana - fananana medikaly
Marinade ho an'ny makirosy - ny fomba tsara indrindra hanamboarana, famokarana ary alohan'ny fifohana sigara
Ahoana no hiantsoana hamsters zazavavy iray?
Mpaka sary Cat Irlin dia manala ny fitiavana ka mandona ny lolo ao amin'ny vavanao!
Rahoviana no manomboka mitombo ny kibo mandritra ny fitondrana vohoka ary inona no tokony handinihako azy?
Rassolnik miaraka amin'ny perla varimbazaha sy kôkômbiana voangom-bazaha - recipe
Sarcoma tavy mena - soritr'aretina